KORNIINKA: KOBCINTA UGU WANAAGSAN IYO TALOOYINKA DARYEELKA - BEER CAGAARAN
Xaalad kasta ha noqotee, sida khudaarta quruxda badan iyo miraha ay u eegaan dukaammada dukaamada, waxyaabaha soo koraya gacmahooda ayaa noqon doona kuwa ugu soo jiidashada badan.
Xaqiiqdii, waad ogtahay in miraha aan la daaweynin nooc kasta oo daaweyn kiimikada ah oo aan lagu karin kiimikooyinka.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad koraan, tusaale ahaan, yaanyada beertaada, ka dibna ma noqon doonaa wax waqti qaadashada.
Waxaad ka heli kartaa talo fiican halkan.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dhulka
Ciidda waa in la diyaariyaa horay, doorbidayaa dayrta. Marka hore, ka saar dhamaan haraadiga dalagga hore, sida dushooda, xididdada.
Sidoo kale ka saar haramaha. Baahida dayrta ku dabool inta ugu badan ee bacriminta: humus, superphosphate, amooniyamta potassium, haddii ay jirto xaalad acidity sare ee ciidda - duurjoogta ama dhuxusha.
Guga hore, amooniyam waa in la codsadaa, tan iyo markii lagu dabaqo dayrta, bacrimiyadani waxay si deg deg ah u milmi doonaan oo la dhaqayaa.
Ka hor inta beerto, ciidda waa la karin, sidaa darteed xal of copper sulfate loo isticmaalo (1 qaado oo vitriol waxaa loo isticmaalaa halkii litir oo biyo ah).
Hadda waxaan diyaarineynaa wax beerto.
Wax kasta oo yaanyo yaanyo ah ayaa noloshooda ku bilaabmaa qaabka geedo. Waxaad labadiinaba iibsan kartaa oo kobcin kartaa naftaada.
Geedo la iibsaday waxaa jira dhowr heer oo ay tahay in ay buuxiso:
Caleemaha iyo kormeeraha xarunta waa inuu noqdaa mid xoogan, toosan, jajab leh;
caleemaha waa inuu noqdaa mid cagaaran;
waa in aysan jirin raad ku saabsan cayayaanka ama cudurada;
noocyada yaanyo waa inuu ku habboon yahay aaggaaga;
noocyada kala duwan ee la xushay waa inay leeyihiin "difaac" ka soo horjeeda cudurrada;
geedo waa in aysan lahayn ubax ama miraha, geedo sida noocan oo kale ah "naxdin leh" by transplanting dhulka.
Haddii aad go'aansato inaad koriso geedo gaar ah oo kuu gaar ah, ka dibna way ka fiicantahay inaad tan sameyso hal ama badh ilaa laba bilood ka hor beerashada qorsheysan.
Waxaa suurtagal ah in ay ku koraan sabiibta labada kartood, iyo sanduuqyada caadiga ah. Wixii geedo waxaa ka wanaagsan inaad soo iibsato isku dar ah ciidda si gaar ah si looga fogaado joogitaanka cayayaanka kala duwan. Isku daridda ciidda ee loo diyaariyey waa in lagu shubaa weel weeye.
Markaas waad awoodi kartaa ku dar isku dar ah diirran oo ah sulfate copper iyo xal mullein ah (10 litir oo biyo ah waxaad u baahan tahay nus shaah ah oo ah fitamiin iyo 3 qaado oo ah mullein sida gruel). Mid ka mid ah weelka waxaad u baahan tahay inaad ku darto 2 abuur, mid kasta oo god leh oo leh qoto dheer oo ah 1 - 1.5 cm Ka dib markii miraha u baahan yihiin inay ku rusheeyaan ciidda diyaarisay.
Ka hor inta abuurka dhalada, heerkulka ku xeeran sanduuqa ama cajaladdu waa inay ahaataa 22-25 ° C. Sidoo kale lagugula taliyay daboolo weelka leh foorno fuushan. Ka dib markii caleemaha ugu horeysay u muuqday, geedo u baahan tahay in la beddelo meel ugu iftiin. Xaaladdan, heerkulku waa inuu ka hooseeyaa, oo ah 15-16 ° C inta lagu jiro maalinta iyo 13-15 ° C habeenkii.
Goobaha lagu qaboojiyo waxay kordhinayaan kobcinta habboon, laakiin waa inaanan oggolaan qorshaha. Nidaamka heerkulka noocan oo kale ah waa in la ilaaliyaa 10 maalmood. Kadib dhammaadka wakhtigaan, heerkulka waa in la sara kiciyaa 18-22 ° C inta lagu jiro maalinta iyo 15-18C habeenkii. Ka dib 5 - 7 maalmood kaddib marka ay baxaan sprouts, seedling oo daciif ah waa in laga saaraa dheriga.
Baahida Seedling waraabinta joogtada ahSidaa daraadeed, caleemaha yaryar waxay u baahan yihiin qiyaas ahaan 0.5 koob oo biyo ah toddobaadkii hal mar. Marka caleemaha 2 ilaa 3 ay muuqdaan, biyaha ayaa la kordhiyaa ilaa hal galaas oo biyo ah, marka 4 ilaa 5 ay baxaan, waxay kor u qaadaan inta jeer ee la waraabiyo ilaa 2 jeer toddobaadkii.
Waxyaabaha kale, geedo u baahan yihiin in si joogto ah loo quudiyo. Bacriminta waxay u baahan yihiin in la sameeyo 10 ilaa 12 maalmood. Marka ugu horeysa ee aad u baahan tahay in ay ku quudiyaan geedo ka dib hal iyo badh - laba toddobaad kadib markii biqilka hore ee daloolka potassium (10 litir oo biyo ah - 1 g of permiranate). On hal seedling u baahan tahay 0.5 koob oo xal.
10 maalmood ka dib waxaad u baahan tahay inaad sameysid duufaan iyo HOL (10 litir oo biyo ah - 3 qaado oo mullein macaan ah iyo 1 tsp oo HOL). On hal duurka 1 koob oo bacriminta.
Haddii aad horey u dooratay taariikhda saxda ah ee beerto, markaas 76-7 maalmood ka hor tan, geedo u baahan yihiin in la quudiyo markii ugu dambeysay. 10 litir oo biyo ah waxaad u baahan tahay 1 tbsp. nitrophoska qaadada iyo 1 kiniin ah raad raac.
Goob furan oo geedo ah micnaheedu waa isbedel joogto ah ee xaaladaha cimilada, sidaas darteed, habka diyaarinta geedo waa in sidoo kale ku jiraan joojinta. Hannaankani waa inuu bilaabo Abriil - Maajo.
Si tan loo sameeyo, ka bax geedaha balakoonka leh daaqadaha furan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso heerkulka, sababtoo ah geedo way dhiman doontaa marka heerkulku hoos u dhaco 10 ° C. Intaa waxaa dheer, waa in ay jirtaa biyo ku filan dhulka si looga hortago geedo ka soo baxa.
Inta lagu jiro adag tahay marka hore, geedo waa in la daadiyaa si aan gubashadu u muuqan caleemaha. Waxaa lagu talinayaa in la qaado tallaabooyin ka hortag ah ka hor inta aan la beeri si looga fogaado muuqaalka cudurada fangas. Si arrintan loo sameeyo, geedo u baahan tahay in la isticmaalo xal of oxychloride copper (10 litir oo biyo ah - 1 tbsp qaadada).
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan yaanyada sii kordhaya ee lagu koriyo
Waxaan u jeednaa marxaladda ugu muhiimsan: beerashada geedo
Iyadoo beerto geedo waa ka wanaagsan tahay in aan la degdegin, sida dhaxan habeenkii suurto gal ah si weyn u dhaawici karaan duurka. Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo isbeddellada noocyada kala duwan iyo xaaladaha cimilada ee gobolka, laakiin waqtiga ugu wanaagsan ee caadiga ah ee beerto waa midka labaad ee bisha May. Waxaa lagama maarmaan ah in dayax-gacmeedku uu si bilaash ah u galo goobta dhulka.
Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo duurka ee yaanyada laga bilaabo gustska dabaysha. Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaqiiqda ah in yaanyada aan la beerin karin meelahaas oo ah wakiilada qoyskooda habeenkii iyo hadhuudh aan hore u korin.
Sidoo kale laguma talin in la beero yaanyada muddo labo sano ah isla goobtaas. Waxay u fiicnaan laheyd haddii dhadhanka hore, xididdada ama cagaarka ay ku koraan meeshaas. Laguma talinayo in la doorto meel ka soo degaysa dhulka hoose, sida meelahaas waxaa jiri doona qoyaan badan.
Waqtiga ugu fiican ee maalinta la furo wuxuu noqon doonaa subaxda ama fiidka. Calaamaduhu waxay u baahan yihiin inay hore u qodaan, 4 ilaa 5 maalmood. Qoto dheerta iyo ballaadhku waa inuu u dhigmaa xajmiga buunshaha xayawaanka. Masaafada u dhexeysa duurka deriska ah waxay ku xiran tahay sifooyinka noocyada kala duwan, celcelis ahaan waxay noqon doontaa 30-50 cm Haddii aad ku beeri duurka si habaysan, ka dibna ma noqon doono dad badan.
Meelaha safka ah waa inay noqdaan 50 - 70 cm, waa lagama maarmaan in la geliyo godadka daloolka, oo ku rusheeya dheriga ciidda. By waqtiga beerto, dhererka of asliga ah ee seedling waa inay ahaadaan 35 - 40 cm dherer. Isla markiiba ka dib markii la beero dhulka, waxaad u baahan tahay inaad ku darto humus si fiican, ka dibna biyo leh xisaabinta 1 litir oo biyo ah 1 bush.
Ha iloobin daryeelka saxda ah
Tamaandho ayaa si xun u falcelisa labadaba si ay u qoyaan badan iyo abaar. Sidaa darteed, waraabiyo duurka waa in ay dhif ah, laakiin biyo badan.
Isla markiiba ka dib markaad degto, waxaad u baahan tahay inaad joojiso 10 maalmood. Markaa waxaad u baahan tahay inaad buuxiso biyaha la'aanta dhulka 5 ilaa 7 maalmood. Qiyaas ahaan 10 litir oo biyo ah ayaa la isticmaalayaa hal baadiyaha. Biyaha waa in si adag loo shubaa xididka, si aysan biyuhu u helin inay baxsadaan ama goosashada xiga.
Kalluunka yaanyo ma laha qoyaan ku filan, haddii caleemaha caleemaha, ubax ku dhaco ama ugxan.
Haddii aad ku koraan yaanyada fiiqan, ka dibna uma baahnid inay xidhaan. Haddii kala duwanaanshuhu uu sareeyo, garafku waa qasab.
Si aad u xirto duurka, halka laga beerto dhinaca woqooyiga ee baadiyaha, waxaad u baahan tahay inaad wado 10 cm saamiga ka soo kormeerka dhexe ee baadiyaha. Marka lagu daro dhirbaaxo, waxaad isticmaali kartaa mesh ama khudaar gaar ah. Waxaad u baahan tahay inaad xirto qalab jilicsan si aaney u jirin wax farsamo ah oo ku yimaada asliga ah.
Waxaad xiri kartaa ma aha oo kaliya ee afkoda, laakiin sidoo kale laayay caleemo, maadaama ay si fudud u jebin karaa miisaanka midhaha.
Si biyaha loogu hayo inta ugu badan ee suurtogalka ah dhulka, dhulka ku wareegsan duurka waa la daboolay mulch. Sida qalabka la doonayo aad isticmaali kartaa peat, digada qudhuntay. Laakiin mulchka ugu fiican ee yaanyada waa la jarjarayaa.
Gooyo yaanyada waxaa lagu magacaabaa pasynkovaniem. Habkani waa inuu ka saaro caleemaha dhinaca duurka (kore). Marka caleemaha dhinaca koray dhererka 4 - 6 cm, ka dibna waxay ahayd wakhti ay ka saarto.
Waxaa lagugula talinayaa inaad jebiso, maaha inaad iska gooyso, raadkuna waa inuu ku sii jiraa meeshii fogayd ee fog, kaas oo qalajin doona. Sidaa daraadeed, waxaa fiican inaad ka saarto caruuta subixii. Marka ay duurka u bilaabaan inay Bloom, waxaad u baahan doontaa inaad ka saarto caleemo, kuwaas oo ku yaal hoose ee heerka burushka fruiting.
Ujeedada ugu weyn ee manjooyin waa in laga saaro culeyska dheeraadka ah ee asliga ah, sababtoo ah caleemaha dheeraadka ah iyo caleemaha waxay ka qaadaan qaar ka mid ah casiirka nafaqada ee burushyada leh miraha.
Cudurada ugu daran ee tamaacadu waa dabayl goor dambe.
Marka hore, fungus ayaa cirridka cayayaanka, ka dibna midhaha. Haddii aadan talaabo qaadin, waxaad lumin kartaa in ka badan kala badh dalagga. Daawo ahaan, waxaad isticmaali kartaa xal sokor ah (0.2 kg oo toon ah oo baaldi biyo ah), oo aad u baahan tahay inaad ku adkaysato maalinta.
Badeecadda waa in la gartaa iyo duurka, iyo miraha. Laakiin daawooyinka ugu waxtar badan waa fungicides. Waxay kari karaan ma aha oo kaliya duurka sare, laakiin sidoo kale geedo. Marka laga soo tago phytophthora, yaanyo waxyeelo iyo kallana. Cudurkaasi wuxuu ku dhufan karaa dhadhanka iyo midhaha miraha.
Si arrintan looga fogaado, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u biyo u daadiso, samee kiimikada kalsiyum (50 g halkii 1 sq.m.) oo si fiican u furfurnaanta ciidda.